नत्र बाँच्न गाह्रो हुन्छ । लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गरि आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उपाएहरु खोज्नुपर्छ-मुल्मी(video) – Online Annapurna
नत्र बाँच्न गाह्रो हुन्छ । लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गरि आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उपाएहरु खोज्नुपर्छ-मुल्मी(video)
१४ बैशाख २०७७, आईतवार १३:१९ April 26, 2020 75 Views
आरजू/अनलाइनअन्नपूर्ण-पोखरा, वैशाख १४, २०७७
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले लकडाउनको मोडालिटिलाई परिवर्तन गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उपाएहरुको खोजिमा लाग्नु पर्ने बेला आईसकेको बताउनु भएको छ ।
उद्योग, कलकारखानालाई पूर्वावस्थामा सुरक्षित तवरले फर्काउन, मौसमी खेती प्रणालीलाई सहज बनाउन र निजि क्षेत्रसंगको हातेमालोलाई बलियो बनाउन नितान्त आवस्यक भएको हामीसंगको कुराकानीमा बताउनु भएको हो ।
विपद परेको बेलामा भन्दा विपद पूर्वका दिनमा पूर्व तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्नु पर्ने रहेछ भन्ने पाठ हामीलाई देशमा भएको लकडाउनले सिकाएको छ, मुल्मीले भन्नुभयो “हामीले पहिले भन्दै आएको कुरा हो, सरकारले जनताका मूलभूत आवस्यक्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लागयतका क्षेत्रका पूर्वाधारहरु बलियो बनाउनु पर्छ । अहिले बिपद पर्यो, हामीलाई चुकचुकाएको छ ।”
by-aarju bista salyani
मुल्मिले शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्न आयातमुखि नभएर निर्यातमुखि अर्थ व्यवस्थालाई ध्यान दिएर अगाडी बढ्नु पर्ने खाँचो रहेकाले यसका लागि मुलुकको राजनीतिक अवस्था स्थिरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उहाँको बिचार छ ।सरकारको तर्फबाट नेपालीलाई जोगाउन लकडाउनको व्यवस्था गरियो यो स्वागत योग्य कुरा हो । यो अवस्थामा हाम्रा सबै गतिविधि बन्द हुन्छन्, यसो गर्नु भनेको जनताको सुरक्षाको लागि र राज्यको कर्तव्य पनि हो । एक महिना पूरा भएको छ, महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक गतिवधि निष्कृय भएको छ । हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति, काम गर्ने क्षमता भएकाहरु, दैनिक ज्यादारी गरेर बस्नेहरु, रोजगारमा संलग्न हुनेहरु, करारमा बस्नेहरु र श्रमिक मानसिक रुपमा प्रभावित हुनु स्वाभाविक नै हो । दैनिक रुपमा ज्यालमा काम गर्ने वढि चिन्तित भएका छन् । यो अवस्थामा हामीलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कस्तो नयाँ मोडालिटिीमा जाने भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
हामीले लकडाउनले गर्दा ठूलो क्षेति व्यहोर्नु पर्ने बनाएको छ । हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानि गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ । किनभने विपद पूर्वका दिनमा पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारका कामहरु गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखाएको छ । “जब पर्छ, तब टर्छ” भन्ने बाटोमा जान हुँदैन, भोलिका दिनमा सरकारले आम नागरिकले पाउनु पर्ने सुविधालाई बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने सिकाएको छ । आर्थिक गतिविधि नै सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो । त्यो रोकिदाखेरी कति घाटा खानुपर्ने रहेछ भन्ने देखाएको छ । राज्यले आर्थिक सक्रियता वढाउनु पर्छ, नयाँ नयाँ लगानिको वातावरण तयार गर्नुपर्र्छ, रोजगारीको स्थापना, जनतालाई व्यवसायमुखि बनाउन वातावरण तयार गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी देखिएको मुल्मिले बताउनु भयो
आर्थिक संरचनाको व्यवस्थामा फेरवदल गर्नुपर्छ
अहिले सरकारका अगाडी दुई चूनौती खडा भएका छन् । एउटा हो, भएका व्यवसायलाई कसरी पुर्नरुत्थान गर्ने ? र अर्को नयाँ व्यवसायमा आकर्षण गर्नको लागि कस्तो वातावरण तयार गर्ने ? साना देखि ठूला व्यवसायलाई एक महिनाको लकडाउनले ठूलो आर्थिक क्षेती हुने देखिएको छ । त्यसको भरपोषण हुन लामो समय लाग्नेवाला छ । नेपालको आर्थिक अवस्था आयातमुखि छ र निर्यात असाध्यै कम रहेको छ । मुल्मिले भन्नुभयो :“यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई आत्म निर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने संकेत गरेको छ । नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमुखिको बाटोमा चल्नका लागि कसरी जान सकिन्छ सोच्ने र गर्ने बेला भएको छ ।” यो संगै हामीले केहि समयमै आर्थिक संरचनाको व्यवस्थामा फेरवदल गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको मुल्मिको भनाई छ ।
नयाँ संरचनाउन्मुख हुनको लागि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एकिकृत गरेर पुनरुत्थान गर्न जरुरी र महत्वको विषय हो । ठूलो समस्या वित्तिय पहुँचको कुरा पनि हो । वित्तिय संस्थाहरुले सहज ढंगले सबै साना व्यवसायीलाई, कृषिमा लाग्ने व्यवसायीलाई, नयाँ काम गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन नगरेको प्रमाणित गरेको बताउनु भयो । एकातर्फ पूँजिको लागत वढ्यो र अर्कोतिर गरिरहेका व्यवसाय संचालनको लागि चूनौती खडा भएको छ ।
खाद्य सुरक्षाको विषयमा हामी पिडित छौं । यसलाई पार गर्नको लागि लकडाउनको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर खासगरी कृषि क्षेत्रलाई कति सौलियत दिएर जान सकिन्छ त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ । किनभने यो बेला खेतीपातीको समय हो । वजारमा त देखियो नि, दूध पोख्नु पर्यो, हरियो तरकारी वजारमा ल्याउन कठिनाई भयो, कषकले गाईवस्तुलाई खुवाउनु पर्यो । किनभने हामीले गम्भिर भएर सहि व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ।
राज्यले अब आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गरेर नयाँ संरचना तयार गर्नै पर्छ, पूँजीको लागतलाई कम गर्नुपर्छ । लागत वढदै गयो भने बाँच्न कठिन हुने बताउनु भयो । यतातिर राज्य गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ । भोलिका दिनमा बचत कम हुँदै जान्छ, बचत सकिदै गएको छ, त्यसको लागि सरकारले अनुत्पादनक क्षेत्रको खर्चलाई घटाउनु पर्छ । यसको असर आउने दुई वर्षसम्म पर्छ ।
“राष्ट्रिय उत्पादन वढाउनको लागि सरकारले ठूलो मेहनत गर्नुंपर्छ, सरकारी नियमन, सररकारी वातावरण र सहुलियतमा भर पर्छ । वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्छ, त्यो वातावरण तयार गरेर असंगठित क्षेत्रको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मजदुरलाई कुनै किसिमको सहुलयित नदिएर उत्पादन पनि वढाउन सकिदैन” मुल्मिले भन्नुभयो ।
सरकारको कामले सशंकित बनायो
यहिबीचमा सरकारले रानीतिक खेल खेल्यो । नयाँ किसिम कामले संशंकित हुने अवस्था निर्माण गर्यो । जो मुलुकको लागि दूर्भाग्यपूर्ण हो । नागरिकको ध्यान अर्कैतिर केन्द्रीत गरेको देखियो, त्यो सत्ताकै लागि भएको जस्तो देखियो । जो अहिले मुख्य थिएन । सरकारले सत्तामा स्थायी रुपमा टिकिरहनको लागि बेला बेलामा अध्यादेश ल्याउने गर्दछ, तर दवावलाई सहन नसकेर जारि अध्यादेशलाई फिर्ता लिने काम गर्यो जो स्वागत योग्य कुरा हो तर राजनीतिक धरातललाई फोहोर गरिदिएको छ । राजनीतिक नियूक्ति पनि उचित थिएन तर काम नगरेको ठाउँमा यो बेलामा सरकारले प्रोत्साहन भत्तालाई रोक्यो, ठीक गर्यो ।
सरकारले गलत उदेश्यले काम गरिरहेकाहरुलाई कारबाहि गर्न ढिला गर्र्यो । करोडौं रुपैयाँको घोटाला गर्दा, गुणस्तरहिन माल सामान सप्लाई गर्दा चुपचाप लागेर बस्नु भनेको व्यवसायीको लागि हितकर नभई विभेद गरेको मुल्मिले बताउनु भयो ।
नीजि क्षेत्रलाई साथ लिएर जानु पर्यो
कि सरकारले रोजगार सिर्जना गर्नु पर्यो, कि त नीजि क्षेत्रलाई साथ लिएर जानु पर्यो । आगामी दुई वर्षसम्म विदेशबाट सहयोग ल्याउँला भन्ने आशा गर्नु भन्दा नीजि क्षेत्रलाई साथमा लिएर अब आत्मनिर्भरमुखि अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि समान पहुँको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कर्मचतारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ र निजि क्षेत्र पनि अबको अवस्थामा सबैको हितको क्षेत्रमा काम दिने लिने वातावण तयार गर्नमा लाग्नु पर्छ, उहाँले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश कोरोनाभाइरसरहित भएको छ यो खुसिको कुरा हो । अब यसको संक्रमणबाट बच्ने उपाएहरु अवलम्वन गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा पनि कसरी पाईला चाल्न सकिन्छ ? सरकारले विज्ञहरुको परामर्श लिएर, योजना बनाएर संगसंगै जाने वातावरण बनाउनु पर्ने अवसर आएको छ, ध्यान अब त्यतातिर दिनुपर्छ, मुल्मिले बताउनु भयो ।